Warbixin:Dowladda farmaajo 70 maaalin ka dib maxaa u qabsoomay maxaana is badalay | Xaqiiqonews
Warbixin:Dowladda farmaajo 70 maaalin ka dib maxaa u qabsoomay maxaana is badalay
8-dii bishii febaraayo ee sanadkan waxaa magaaladda Muqdisho ka dhacday doorasho si lama filaan ah uu ugu soo baxay Maxamed Cabdullahi Farmaajo kaas oo noqday madaxweynihii 9-aad ee Soomaaliya.
Guud ahaan Soomaaliya ayaa laga soo dhaweeyay doorashada Farmaajo isagoo kadibna magacaabay Ra’isul wasaarre soo dhisay xukumad tiro ahaan badan.
Hadaba 70 maalin kadib maxaa uqabsoomay Isbadalka cusub ee Soomaaliya ka curtay
Inkastoo dowladda cusub ay soo dhaweysay dilal iyo qaraxyo ay ku dhamadeen dad shacab ah, masuuliyiin iyo saraakiil ciidan hadana dad badan ayaa aamisan in 70 maalin kadib dalka uu galay marxalad ka duwan tii hore.
xarakada AlShabaab ayaa awood uyeeshay iney laba jibaaraan weraradii ay geysan jireen, Dowlada ayaa dadaal ugu jirta iney wanaajiso xariirka caalamka gaar ahaan wadamada carabta halka wadamada dariska ah uu shaki wali ku jiro xariirkooda.
Si kastaba, 70 maalin kadib dowlada ayaan lagu arag wax is badal muuqdo waxa ayna ku guul dareysteen arimo badan oo ay ugu horeyso joojinta dhiiga daadanaya gaar ahaan Muqdisho